Ny fitantanana kontraktoraly lafatra natolotr'i Zeevou
Tantano mora ny orinasan-tserasera sy miditra mora foana amin'ny lisitry ny lahasa nanendrena azy ireo.
Manamora ny fiainana ny asa outsourcing. Na farafaharatsiny mba maniry hieritreritra ny olona iray. Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny asa atao any ivelany dia ny hoe sarotra be ny mampahafantatra ireo orinasa avy any ivelany ny famandrihana tsy miovaova ataonao. Ankoatr'izay, ny fanendrena asa sy ny fanarahana ny fivoarana amin'ny ambaratonga dia matetika no mitaky mpampiasa ny pmses sy Channel Managers hampiasa ny fampiharana an'ny antoko fahatelo toa ny Asana or Trello noho ny fetran'ny fampiasa sy ny fiasan'ny rafitr'izy ireo.
Ny fitantanana ny tetikasa sy ny fizarana asa ho an'ireo orinasa mpanofa vakansy miasa manerana ny tanàna mihoatra ny iray dia mety ho sarotra tokoa.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Contractor Management manampy?
Zeevou dia mamela anao hamorona mombamomba ny orinasa tsirairay izay ampanaovinao ny outsourcing ao anatin'ny anao asa ny. Ohatra, afaka mamorona orinasa ianao ho an'ny fanadiovana mpamatsy ary mifanerasera a mombamomba ny mpitantana miaraka amin'izany.
Io dia ahafahan'ny mpitantana miditra sy mahazo fomba fijery voafetra momba ny tetiandro famandrihana (tsy afaka mahita ny antsipiriany momba ny vahiny na ara-bola amin'ny famandrihana). Ankoatr'izay, afaka miditra amin'ny lisitry ny lahasa izy ireo, ao anatin'izany ny fizahana auto-generated and tapaky ny volana nijanonany asa fitandremana an-trano, ary koa izay mety ho noforoninao tanana.
Ny talen'ny orinasa fanadiovana dia afaka manisy marika a vondrona toy ny madio raha vantany vao vita ny madio, mba hahafahanao mijanona amin'ny fanavaozana ny famaranana rehetra ary afaka manontany azy ireo raha toa ka mbola miseho maloto amin'ny rafitra ny singa iray izay antenainao nodiovina.